खुसीको खबर : मलेसिया जनवरी १ देखि खुल्ने, कस्ता ब्याक्तिहरु जान पाउने ? - jagritikhabar.com
खुसीको खबर : मलेसिया जनवरी १ देखि खुल्ने, कस्ता ब्याक्तिहरु जान पाउने ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानका हवाई यात्रुको सुविधालाई ध्यान दिँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यात्रुका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
यात्रुले दुःख पाएको र ट्याक्सीसँग बार्गेनिङ गर्दा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको गुनासो आएपछि यात्रुका लागि बसको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अबदेखि यात्रुले विमानस्थलको बाहिर ओर्लिएर सिधै सार्वजनिक गाडी वा आफ्नो रोजाइको यातायातमा यात्रा गर्न सक्नेछन् ।